Mamwe Mapato ezveMatongerwo eNyika Otarisira Kushanya kweChikwata cheANC muNyika
Munyori mukuru webato reAfrican National Congress (ANC), VaAce Magashule ndivo vanonzi vachatungamira chikwata chenhengo dzebato ravo chiri kutarisirwa kupinda muZimbabwe neChipiri.
Chikwata chenhengo dzebato riri kutonga kuSouth Africa, reANC, chave kutarisirwa kupinda munyika mangwana kuti chinzwisise nezvematambudziko anonzi nevamwe akatarisana nenyika, asi hurumende pamwe nebato reZanu PF vachiti munyika hamuna matambudziko.
Chikwata ichi, icho chinonzi chichange chiine nhengo gumi chichitungamirirwa nemunyori mukuru webato reANC, VaAce Magashule, chinonzi chichasangana nebato reZanu PF nemusi weChitatu, chozotarisirwawo kusangana nevanopikisa hurumende, vemakereke pamwe nevemasangano akazvimirira.
Chimwe chikwata chakambotumwa munyika nemutungamiri weSouth Africa VaCyril Ramaphosa chakapinda munyika mwedzi wapera chakangosangana nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa chete chisina kusangana nevamwe vane chekuita nezvematongerwo enyika muZimbabwe.
Hatina kukwaisa kubata mutauriri webato reANC VaPule Mabe kuti tinzwe zvizhinji.
Tabatawo mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi kuti tinzwe divi reZanu PF panyaya iyi, asi vati vanga vari mumusangano wanga uchizeya nezvenyaya iyi, vakavimbisa kuti vanga vachizopindura mibvunzo yedu vabuda mumusangano uyu.
Asi VaMugwadi vagara vachiti munyika hamuna matambudziko vachiti kushanya kwechikwata ichi kwakanangana nekudyidzana kwemapato maviri aya, Zanu PF neANC, nekudaro hapana chinoshamisa.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatywayo, vanoti zvakakosha kuti chikwata ichi chipinde munyika chione nekunzwa choga nezvematambudziko ari munyika, paine tarisiro yekuti izvi zvingangoita kuti VaMnangagwa nemutungamiri weMDC Alliancce, VaNelson Chamisa vagare pasi vataurirane.
VaHlatywayo vanoti bato ravo rakagadzirira chose kusangana nechikwata ichi kana rakapiwa mukana wekuti vasangane.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Doctor Urayayi Zembe, vanove zvakare nyanzvi mune zvematongerwio enyika, vanoti vanoona rwendo rwechikwata cheANC urwu rwuine pundutso pamatambudziko ari munyika, sezvo bato iri rave nemakore zana nemasere eruzivo rwezvematongerwo enyika.
Doctor Zembe vanoti chikwata ichi chakaketwa mushure mekuonekwa kwehudzamu nechiremera chevanhu ava nemusangano wepamusoro webato reANC, zvichireva kuti chichatevera chichatevera zvisungo zvebato iri nemazvo.
Vanoti bato ravo rakagadzirirawo kusangana nechikwta ichi kana rakapiwa mukana, uye vachatambira chikwata ichi nemaoko maviri.